Imidanso ejwayelekile yesifunda seCaribbean: Kusuka ku-salsa kuye ku-bachata | Izindaba Zokuhamba
Imidanso ejwayelekile yesifunda seCaribbean
Imidanso ejwayelekile yesifunda seCaribbean yayinezimpande zayo esikhathini esedlule. Lokhu sikubiza ngensimu enkulu efaka phakathi izizwe eziningana ezigezwe yiwo kanye Ulwandle lwaseCaribbean kanye neziqhingi ezizungezwe yile ngxenye yoLwandlekazi i-Atlantic. Phakathi kwezokuqala kukhona I-México, Colombia, Nicaragua o I-Panama, ngenkathi sikhuluma ngokugcina, singabala izizwe njenge Cuba (uma ufuna ukwazi kabanzi ngamasiko alelizwe, chofoza lapha), I-Dominican Republic o Jamaica.
Ngakho-ke, imidanso ejwayelekile yesifunda seCaribbean yilezo ezenziwa kuleyo nsimu enkulu. Njengamanje, zingumphumela wokuhlanganiswa kwamathonya amathathu: owomdabu, owaseSpain nowase-Afrika, abokugcina balethwa lapho yilabo ababeyizigqila njengendawo ababeya kuyo. Eqinisweni, iningi lale midanso yahlelwa ekupheleni kwezinsuku zokusebenza kanzima kwazo zombili izigqila nabasebenzi abakhululekile. Kepha, ngaphandle kokuchitha isikhathi, sizokutshela ngalezi zingqisho.
1 Imidanso ejwayelekile yesifunda seCaribbean: ukuhlukahluka okukhulu
1.1 ISalsa, umdanso waseCaribbean ngokugqwesa
1.2 IMerengue, umnikelo waseDominican
1.3 I-mambo nemvelaphi yayo yase-Afrika
1.5 ICumbia, ifa lase-Afrika
1.7 Eminye imidanso ejwayelekile yesifunda esingathandwa kangako seCaribbean
Imidanso ejwayelekile yesifunda seCaribbean: ukuhlukahluka okukhulu
Okokuqala okugqamile ngale midanso ukuthi inani elikhulu labo abakhona. Isibonelo, okubizwa nge- kumnyama, odabuka esiqhingini saseSanta Lucia; i puja IColombia, i ucansi noma ziyi-palenquero noma i- isigubhu esincane, owazalelwa ePanama. Kepha, ngenxa yokuthi akunakwenzeka ukumisa yonke le midanso, sizokutshela mayelana naleyo ethandwa kakhulu.
ISalsa, umdanso waseCaribbean ngokugqwesa
ISalsa, umdanso ojwayelekile wesifunda seCaribbean par ubuhle
Ngokuthakazelisayo, umdanso ojwayelekile waseCaribbean waduma ku- ENew York kusukela eminyakeni engamashumi ayisithupha edlule. Kungaleso sikhathi lapho abaculi basePuerto Rican babeholwa yiDominican UJohnny pacheco yamenza waduma.
Kodwa-ke, imvelaphi yayo ibuyela emazweni aseCaribbean futhi ikakhulukazi Cuba. Empeleni, isigqi sayo kanye nomculo waso kuncike emculweni wesintu wakuleloya lizwe. Ngokuqondile, iphethini yayo yesigqi ivela ku- bangama-cuban futhi imiculo yathathwa ku bangumontuno.
Futhi iCuba ziningi izinsimbi zakhe. Ngokwesibonelo, i-bongo, i-pailas, i-güiro noma i-cowbell ezigcwaliswa abanye njengepiyano, amacilongo kanye namabhasi aphindwe kabili. Ekugcineni, ukuvumelana kwayo kuvela emculweni waseYurophu.
IMerengue, umnikelo waseDominican
IMerengue umdanso othandwa kakhulu ku- I-Dominican Republic. Kubuye futhi kwafika United States Ikhulu leminyaka elidlule, kodwa umsuka walo ubuyele ekhulwini leshumi nesishiyagalolunye futhi akucaci. Kakhulu kangangokuba kunezinganekwane eziningana ngakho.
Omunye owaziwa kakhulu uthi iqhawe elikhulu lomdabu lalimala emlenzeni lilwa neSpanishi. Lapho ebuyela esigodini sangakubo, omakhelwane bakhe banquma ukumenzela iphathi. Futhi njengoba bebonile ukuthi uyaxhuga, bakhethe ukumlingisa uma bedansa. Umphumela waba ukuthi bahudula imilenze yabo futhi bahambisa izinkalo zabo, okuyizinto ezimbili ezijwayelekile zokuhlelwa kwemeringue.
Noma ngabe kuyiqiniso noma cha, kuyindaba enhle. Kepha iqiniso ngukuthi lo mdanso usungomunye wabantu abadume kakhulu emhlabeni, kuze kufike ezingeni lokuthi umenyezelwe Amagugu Amasiko Angaphatheki Wobuntu ngu-UNESCO.
Mhlawumbe okuthe xaxa ngokwengeziwe yisiko lokuthi livela kubalimi besifunda sase ICibao ukuthi bazothengisa imikhiqizo yabo emadolobheni. Bahlala ezindaweni zokulala kanti omunye wabo wayebizwa ngoPerico Ripao. Yilapho bebezijabulisa khona ngokwenza lo mdanso. Ngakho-ke yabizwa ngaleso sikhathi nasendaweni leyo ncamashi UPerico Ripao.
Ngokuqondene nomculo wakhe, kusekelwe kumathuluzi amathathu: i-accordion, i-güira ne-tambora. Ekugcineni, futhi kunelukuluku lokuthi umuntu ophambili ophethe ukuthuthukiswa nokuthuthuka kwe-meringue wayengumashiqela URafael Leónidas Trujillo, bonke abalandeli balokhu ukuthi ngubani owadala izikole nama-orchestra ukukuqhakambisa.
I-mambo nemvelaphi yayo yase-Afrika
Phakathi kwemidanso ejwayelekile yesifunda seCaribbean, lokhu kwenziwa e Cuba. Kodwa-ke, umsuka wayo kuthiwa wenziwa yizigqila zase-Afrika ezafika esiqhingini. Kunoma ikuphi, inguqulo yesimanje yalo mdanso ingenxa ye- I-orcastra ye-Arcaño eminyakeni engamashumi amathathu yekhulu elidlule.
Ukuthatha Idolobha laseCuba, washeshisa futhi wethula ukuvumelanisa kwingqophamlando ngenkathi engeza izinto zalolu hlobo montuno. Kodwa-ke, kungaba iMexico UDamaso Pérez Prado ngubani ongadumisa inkosi emhlabeni jikelele. Wenze lokhu ngokwandisa inani labadlali ku-orchestra futhi wengeza izinto ezijwayelekile ze-jazz zaseNyakatho Melika ezifana namacilongo, ama-saxophones, nama-double bass.
Isici senza futhi okuhlukile ukuphikisa lokho kwenze ukuthi umzimba uhambele kusigqi sayo. Kakade eminyakeni engamashumi amahlanu yekhulu lamashumi amabili, abaculi abaningana badlulisele i-mambo ku ENew York okwenza kube yinto yangempela emhlabeni jikelele.
Futhi wazalelwa ku- CubaImvelaphi yayo ngokunembile itholakala kumphumela we-mambo. Kwakukhona abadansi ababengakhululekile ngesigqi sokukhululeka somdanso osakazwa nguPérez Prado. Ngakho-ke bafuna okuthile okuzolile ngakho-ke yazalelwa ku-cha-cha nge-tempo yayo ezolile kanye nemiculo ehehayo.
Ngokukhethekile, ukudalwa kwayo kubangelwa i-violinist nomqambi odumile U-Enrique Jorrín, okwakhuthaza ukubaluleka kwezingoma ezazidlalwa yiqembu lonke lezinsimbi noma ngumculi oculayo.
Ngokusho kochwepheshe, lo mculo uhlanganisa izimpande ze- Idolobha laseCuba nezakhe izinto, kepha kuguqula ukukhulelwa kwayo kwezingoma nesigqi. Ngaphezu kwalokho, yethula izinto ze- skottische kusuka eMadrid. Mayelana nomdanso uqobo lwawo, kuthiwa wenziwa yiqembu elaliklama umdanso eklabhini yeSilver Star eHavana. Izinyathelo zakhe zenze umsindo emhlabathini okwakubonakala ngathi ukushaywa kathathu ngokulandelana. Futhi besebenzisa i-onomatopoeia, babhabhadisa uhlobo njengo "Cha Cha Cha".
ICumbia, ifa lase-Afrika
Ngokungafani neyangaphambilini, i-cumbia ithathwa njengendlalifa ye- imidanso yase-afrika abathathe baya eMelika labo ababethuthwa beyizigqila. Kodwa-ke, inezakhi zomdabu nezaseSpain.
Yize namhlanje kusinwa emhlabeni wonke futhi kukhulunywa nge-cumbia yase-Argentina, Chilean, Mexico kanye neCosta Rican, imvelaphi yalo mdanso kufanele ifunwe ezindaweni EColombia nasePanama.
Njengomphumela wokuhlanganiswa esasikhuluma ngakho, izigubhu zivela ku-substrate yabo yase-Afrika, kanti ezinye izinsimbi ezifana ama-maraca, ama-pitos kanye ne-gouache bangabomdabu baseMelika. Esikhundleni salokho, izingubo ezigqokwa ngabadansi zivela ohlotsheni lwakudala lwe-Spanish lwe-wardrobe.
Kepha okusithandayo kakhulu kulesi sihloko, okungumdanso onjalo, kunezimpande zase-Afrika zangempela. Iveza inkanuko yobuciko kanye nomdanso ojwayelekile wemidanso engatholakala namuhla enhliziyweni ye- Afrika.
Kubuye kube umdanso wangempela I-Dominican kepha yelulelwe umhlaba wonke. Kwavela eminyakeni engamashumi ayisithupha nesithupha yekhulu lamashumi amabili kusukela i-bolero enesigqi, yize futhi kuveza amathonya avela ku- merengue futhi i bangama-cuban.
Ngaphezu kwalokho, kwi-bachata ezinye izinsimbi ezijwayelekile zalezo zingqimba zashintshwa. Isibonelo, ama-maracas we-bolero athathelwe indawo ngu güira, nazo ezomndeni oshayayo, futhi zaziswa isiginqi.
Njengoba kwenzekile ngeminye imidanso eminingi, i-bachata ibithathwa ekuqaleni kwayo njengomdanso wamakilasi athobeke kakhulu. Ngemuva kwalokho kwaziwa njenge "Umculo obabayo", ebibhekise kubuhlanya obukhonjiswe ezingqikithini zabo. Kwakuvele sekungamashumi ayisishiyagalombili eminyaka yekhulu lamashumi amabili lapho uhlobo lusakazeka emhlabeni wonke laze lwahlukaniswa yi-UNESCO njenge Amagugu Angaphatheki Obuntu.
Ngakolunye uhlangothi, kuwo wonke umlando wayo, i-bachata ihlukaniswe yaba ngama-subgenres amabili. I- tecnoamargue wayengomunye wabo. Ihlanganise izici zalo mdanso nomculo owenziwe ngezinsimbi zobuchwepheshe ngenkathi uhlangana nezinye izinhlobo ezifana i-jazz noma idwala. Umdlali wakhe obedlula bonke kwaba USonia Silvestre.
I-subgenre yesibili yilokho okuthiwa i-pink bachata, eselitholile ukuthandwa kakhulu emhlabeni wonke. Kwanele ukuthi sikutshele ukuthi izibalo zakhe ezinkulu UVictor Victor futhi ngaphezu kwakho konke, UJuan Luis Guerra ukuze uyiqaphele. Kulokhu, kuhlanganiswe nefayili ye- i-ballad yothando.
Ngokuqondene nohlobo njengamanje, umbonisi walo omkhulu kunabo bonke ngumculi waseMelika odabuka eDominican Romeo Santos, okokuqala neqembu lakho, I-adventure, futhi manje uwedwa.
Eminye imidanso ejwayelekile yesifunda esingathandwa kangako seCaribbean
Imidanso esikutshele yona kuze kube manje ifana neCaribbean, kepha yeqe indawo yayo yaduma emhlabeni wonke. Kodwa-ke, kuneminye imidanso engaphumelelanga kangako phesheya, kepha ithandwa kakhulu endaweni yaseCaribbean.
Kuyindaba ye- ngokuhlanganyela, Imvelaphi yayo isendaweni yase Colombia ngaphambi kokufika kweSpanish. Ihlanganisa amathonya avela emapayipini endabuko anezigqi zase-Afrika futhi inengxenye ecacile eyengayo. Njengamanje ngumdanso we-ballroom onesigqi esikhanyayo nesemikhosi. Ukuyidansa, bavame ukuthatha imvunulo ejwayelekile yaseColombia. Okunye okwalesi hlobo lomdanso i- Fandango, engahlangene nakancane negama layo laseSpain. Ekuqaleni kusuka edolobheni laseBolivia lase ushukela, isabalale ngokushesha IColombia Urabá. Kuyiphaseji ejabulisayo lapho, ngokumangazayo, abesifazane bephethe amakhandlela ukwenqaba ukudlala ngothando kwamadoda.
Izimpande ezicacile zase-Afrika zine- mapalé. Kulo mdanso, yizigubhu kanye nomshayayo obeka isigqi. Umsuka wawo wawuphathelene nomsebenzi, kepha namuhla unethoni yomkhosi engenakuphikwa. Kungumdanso onamandla futhi onamandla, ogcwele ubungqabavu.
Ekugcineni, sizokutshela mayelana bullerengue. Njengeminye imidanso ejwayelekile yesifunda seCaribbean, ifaka umdanso, iculo kanye nencazelo emnandi. Lesi sakamuva senziwa kuphela ngezigubhu nangezintende zezandla. Ngokwengxenye yayo, iculo lihlale lenziwa ngabesifazane kanti umdanso ungenziwa ngabashadikazi namaqembu.
Sengiphetha, sikutshele ngeminye yemidanso ethandwa kakhulu eCaribbean. Esokuqala esishilo kuwe sizuze udumo nokwaziwa komhlaba wonke. Ngokwabo, laba bamuva baziwa ngokulinganayo endaweni lapho benziwa khona, kepha kuncane emhlabeni jikelele. Kunoma ikuphi, kunezinye eziningi imidanso ejwayelekile yesifunda seCaribbean. Phakathi kwabo, sizokhuluma ngokudlula farotas, the bhala, zilethwe eMelika ngabaseSpain, noma Ngizoba ngiyazi-ngiyazi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Cultura » Imidanso ejwayelekile yesifunda seCaribbean